Madaxweynaha Galmudug oo kulan la qaatay James Swan iyo Danjiraha Mareykanka U fadhiya SoomaaliyaYamamooto.
March 16, 2021 - Written by Editor
Muqdisho:-Madaxweynaha Dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maanta soo gaaray magaalada Muqdishu ayaa kulan la qaatay Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u fadhiya dalka Soomaaliya James Swan.
Madaxweynaha Galmudug iyo ergeyga gaarka ah ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda Shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaana heshiiskii 17kii September 2020 ee Muqdishu iyo shirarkii guddiyada farso ee ka dhacay Baydhabo .
Sidoo kale Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa uu kulan la qaatay Danjiraha Dowladda Mareykanka U fadhiya Soomaaliya Yamamooto waxay ka wada hadleen arimaha doorashada dalka Ivo qaabkii loo fluit lahaa heshiiskii 17kii September 2020 .
Madaxweynaha Galmudug ayaa isla maanta soo gaaray magaalada Muqdisho isaga oo safar shaqo u jiray dalka Turkiya sida uu warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Galmudug Axmed Shire Falagle.